Kuthodaw စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
Shwenandaw ကျောင်း →
Kuthodaw စေတီတော် (ထို့အပြင်မဟာ Lawka Marazein Paya ကိုခေါ်) မန္တလေးတွင်မန္တလေးတောင်၏ခွမှာတည်ရှိပြီးတစ်ဦးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါသည်, မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ရတာဟာ.
Kuthodaw သန့်ရှင်းသောဗုဒ္ဓဘာသာ script များ၏အိမ်သူအိမ်သားမိတ္တူမှမင်းတုန်းမင်းအားဖြင့် 1860 ရဲ့ကာလအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့. သေချာ script များနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်နိုင်သမျှမင်းတုန်းမင်းသူတို့ကိုအပေါ် chisled ခဲ့အဖြစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစေရန် 729 နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရေးသားခြင်းနှင့်အတူစကျင်ကျောက်တက်ဘလက်. တစ်ခုချင်းစီတက်ဘလက်ထို့နောက်ရာသီဥတုအနေဖြင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်တစ်ဓမ္မ Ceti ဟုခေါ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်းသေးငယ်တဲ့စေတီတော်အတွင်း၌သျောခဲ့သည်.
အဆိုပါ 729 ဘုရားပုထိုးစေတီဗဟိုကြီးမားသောရွှေစေတီဝိုငျးယူနီဖောင်းစတုရန်းတန်းစီထွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်. ရှိပါတယ်3သေးငယ်တဲ့ဘုရားပုထိုးစေတီများ၏အတန်း, အတွင်း, အလယ်တန်းနှင့်အပြင်. ပြင်အတန်းစေတီပုထိုးများရှိပါတယ်3ရင်ပေါင်တန်း, အလယ်နှင့်အတွင်းစိတ်အတန်းစေတီပုထိုးများရှိ2ရင်ပေါင်တန်း. အတွင်းအတန်း၏အရှေ့တောင်ထောင့်တွင်တည်ရှိသောတဦးတည်းအပိုသောကျောက်တက်ဘလက်မြေတပြင်လုံးစေတီတော်ခဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်.
ဘုရားပုထိုးစေတီများ၏အတန်းအကြား၌စိုက်ပျိုးမြောက်မြားစွာရိပ်ရတဲ့နှင့် fragrent ကြယ်ပွင့်ပန်းပွင့်သစ်ပင်များရှိပါတယ်. အဆိုပါကြယ်ပွင့်ပန်းပွင့်ဗုဒ္ဓရုပ်ထုကမ်းလှမ်းတစ်အလှဆင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်သောပန်းပွင့်ကွင်းဆက်စေရန်အတူတကွပေါင်းလိုက်သောနိုင်ပါသည်.
တံခါးဝ Kuthodaw စေတီတော် တောင်တံခါးကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးနောက်သင်ထိပ်မှာနှစ်ဖက်လျှောက်တွင်အများအပြားနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများကိုစတိုင်ပန်းချီကားများနှင့်အတူအလှဆင်ကြောင်းတစ်ပွင့်လင်းတဖက်သတ်ဖုံးလွှမ်းနေသောလူသွားလမ်းတလျှောက်သွားပါ. သင့်အနေဖြင့်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်3သင်နေသောလူသွားလမ်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်အဖြစ်စေတီပုထိုးများ၏အတန်း.
အဆိုပါနေသောလူသွားလမ်းရဲ့အဆုံးမှာသင်သည်ဗုဒ္ဓရန်နတ်ကွန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်. ့အနီးတပြင်လုံးကိုဗိမာနျတျောရှုပ်ထွေးသော၏ layout ကိုတစ်ပုံစံခင်းကျင်းပြသဖြစ်ပါသည်. အဲဒီမှာမှအနတ်ကွန်းအပြင်ဘက်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအလယ်ပိုင်းရွှေစေတီတော်ကိုကြည့်ရှုရန်.
သငျသညျထို့နောက်စကျင်ကျောက်တက်ဘလက်ရာသစ်ပင်များနှင့်အသေးစားစေတီပုထိုးများ၏အတန်းတစ်လျှောက်လှည့်လည်သွား. သင်ကမဆိုကနေ exit နိုင်ပါတယ်4ဝင်ပေါက်ဖို့အတွက် walkway, သငျသညျ လာ. နှင့်သင့်စက်ဘီးသို့မဟုတ်ကားမောင်းသူ left ဘယ်မှာပဲသတိရ.
ဒေသခံတွေမကြာခဏ၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံများသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားရှိသည်ဖို့ Kuthodaw စေတီတော်မှာစေတီတော်အတန်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါစေတီတော်ည 8 နာရီမှာမှီတိုင်အောင် 8 ကနေနေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်.
သငျသညျ Kuthodaw စေတီတော်တည်နေရာအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း – Google Maps ကို
Kuthodaw စေတီတော် 11 လမ်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နန်းတော်ကျုံး၏ထိပ်လက်ျာလက်ကိုထောင့်မှာရပ်, 62nd နှင့် 64 လမ်းများကိုအကြား. ညာဘက်ကိုနောက်တံခါးကို Sandamuni စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်အလားတူပေမယ့်သေးငယ်ဗိမာနျတျောဖြစ်ပါသည်. သင်အချိန်ရှိပါက, ထို့နောက်ထိုနှစ်ပါးသွားရောက်ကြည့်ရှု. ချတဲ့ရွေးချယ်မှုမှကြွလာလိုလျှင်, ထို့နောက် Kuthodaw စေတီတော်သွားရောက်ကြည့်ရှု. လှသောအဆင်း, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်အလွန် Photogenic.